Naqshadaynta Ururka Suuq Geynta. | Martech Zone
Wadahadal aan la yeeshay saaxiibkay iyo saaxiibkay Joe Chernov, VP Marketing ee Kinvey waxaan isdhaafsanay qaar ka mid ah su'aalaha la iswaydiiyo ee aan labadeenaba ka helnay kooxdeena dhexdeeda iyo asxaabta warshadaha. Iyadoo Joe uu yahay Suuqgeeyaha sanadka layaab kuma noqon doontid inaad ogaato in mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo ay tahay:
Sideen ku bilaabi karaa barnaamijka suuq geynta waxyaabaha guuleysta?
Su’aasha labaad ee uu inta badan isweydiiyo waa:
Sidee u qaabeysaa kooxdaada suuq-geynta?
Naxdin? Malaha maya.
Markii aan weyddiiyay saaxiibbaday waxa ii caddaatay in waayo-aragnimada Joe aysan ahayn wax aan caadi ahayn. Xaqiiqdii, waaya-aragnimadayda shaqsiyeed waxay lamid tahay midkiisa oo markii aan bilaabay inaan sameeyo cilmi baaris dheeraad ah way iska cadahay taas Qaab dhismeedka qaab dhismeedka ururka kooxdaada suuq-geynta waa mowduuc kulul. Bilaabashadu waxay rabaan inay dhisaan koox guuleysata ururada waaweyni waxay rabaan inay kooda hagaajiyaan. Waxa naxdin lahaa ayaa ah inaysan jirin waxyaabo badan oo wax ku ool ah oo taageeraya mowduucan.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafey waxaan nasiib u yeeshay inaan hogaamiyo ururada suuq geynta ganacsiga iyo ganacsiga bartamaha suuqa. Waxaan qeyb ka ahaa kooxo dhismo laga soo bilaabay bilowgii sida Kaqeybgal (hadda waa qayb ka mid ah Oracle) oo ku habboon kooxaha Webtrends iyo hada Mindjet. Intii lagu gudajiray waqtigan waxaan diyaariyey buug-ciyaar urur oo kobcin kara qiyaas kasta oo meherad ah, si aad ah loola qabsan karo, oo leh rikoodh guul oo la caddeeyey. Hoos waxaa ku yaal buuggeyga ciyaaraha waxaanan ku rajo weynahay inuu bilaabmayo wadahadal ama uu fikrad u dhalinayo kooxdaada.
Hal shay waa hubaal. Heerka khalkhalka iyo isbeddelka ayaa ku sii kordhaya suuqgeynta. Waxaan u maleynayaa in ururkaaga suuq-geynta ay tahay inuu taageero awooda la qabsiga isbeddeladaas oo lagu guuleysto. Waxaan jeclaan lahaa ra'yigaaga ku saabsan sida aan uga dhigi karno buug-yarahaan mid wanaagsan.
Tags: waaxda suuq geyntaururka suuq geyntaqaab dhismeedka suuq geyntaUrurkaQaab-dhismeedka Urur